လက်ဆေးရန် နှိုးဆော်သည့် နာမည်ကြီး PPAP ဂျပန်အဆိုတော် Piko Taro သီချင်းသစ်(ရုပ်သံ) - DVB
Lead Story ကျန်းမာရေး နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံ ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်း အနုပညာ
လက်ဆေးရန် နှိုးဆော်သည့် နာမည်ကြီး PPAP ဂျပန်အဆိုတော် Piko Taro သီချင်းသစ်(ရုပ်သံ)
Pen-Pineapple-Apple-Pen လို့ ကြားလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေက နာမည်ကြီး ဂျပန် ဟာသလူရွှင်တော် အဆိုတော်စတား Piko Taro ရဲ့ ရေပန်းစား ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သီချင်းတပုဒ်မှန်း သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။
ဒီတခါမှာတော့ Piko Taro က အဲဒီသီချင်းကို လတ်တလော ကမ္ဘာတလွှား ကပ်ရောဂါတခုလို ဖြစ်လာနေတဲ့ COVID-19 ပညာပေးသီချင်းတပုဒ်အနေနဲ့ ပုံစံပြောင်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့ချိန်မှာလည်း အားပေးလက်ခံမှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မူရင်းသီချင်းထဲမှာတော့ မြူးကြွတဲ့ ဂီတသံစဉ်တွေနဲ့အတူ စာသားနည်းနည်းနဲ့ ထပ်ကျော့သီဆိုရတဲ့ ဒီစာသားတွေနဲ့ အချိန် ၄၅ စက္ကန့်စာသာ ရေးဖွဲ့ထားခဲ့တာပါ။
I haveapen… I have an apple… Ah… Apple pen… I haveapen… I have pineapple… Ah… Pineapple pen… Apple pen… Pineapple pen… Ah… Pen Pie Pineapple Apple Pen… Pen Pie Pineapple Apple Pen”
၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီသီချင်းဟာ ထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး Billboard Japan Hot 100 စာရင်းမှာ နံပါတ် ၁ နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး တကမ္ဘာလုံးက တခြားနိုင်ငံတွေအထိပါ ပရိသတ်လက်ခံအားပေးမှုတွေ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်းထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပင်ကိုဟန်၊ စတိုင်အတိုင်း ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့အတူ လက်ဆေးကြဖို့ နှိုးဆော်တဲ့ စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ “I haveahand, I haveasoap. Uh! Wash! Wash! Wash! Wash” စတဲ့ သီချင်းစာသားတွေကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုထားခဲ့တာကို ခံစားနားဆင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းကို သူ့ရဲ့ တရားဝင်ယူကျုဘ်အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှတဆင့် PPAP-2020-/PIKOTARO(ピコ太郎) အမည်နဲ့ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ကတည်းက မျှဝေပေးထားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၃ ရက်အတွင်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနား ဆင်ကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၄ သန်းကျော် ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: Covid-19Pen-Pineapple-Apple-PenPiko TaroPPAPဂျပန်အဆိုတော်
Previous story ထိုင်းအခြေခံပညာသင်ကျောင်းများ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ ပြန်ဖွင့်ရန် သဘောတူ
Next story COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၂ ဦးသေဆုံးမှု ကျန်းမာရေးဌာန အတည်ပြုထုတ်ပြန်